गाउँबाट विस्थापित शिक्षकको परिवार अनशनमा। - Malayakhabar
होम पेज देश समाचार गाउँबाट विस्थापित शिक्षकको परिवार अनशनमा।
गाउँबाट विस्थापित शिक्षकको परिवार अनशनमा।
बैतडी:= बैतडीका एक शिक्षकको परिवार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयअगाडि अनशनमा बसेको छ । पदस्थापनका लागि भनेबमोजिमका कागजातहरू पूरा गर्दा पनि समन्वय इकाईले सुनुवाइ नगरेको भन्दै शिवनाथ गाउँपालिका-६ का करन रानाको परिवार अनशनमा बसेको हो।
शिवनाथ गाउँपालिका-६ हिरापुर माविबाट दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं. ४ को ईश्वर आधारभूत विद्यालयमा काजमा सरुवा भई अध्यापन गराउँदै आउनुभएका रानाले सरुवाका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको बताउनुभएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बैतडी र शिक्षा समिति दुवै विद्यालयको सहमति, दशरथचन्द नगरपालिका र शिवनाथ गााउँपालिकाको सहमतिको कागज माग गरेकोमा त्यो पनि पूरा गरेर इकाईमा पुर्‍याउँदा अहिलेसम्म पदस्थापन नगरेको रानाले बताउनुभएको छ।
राना शिवनाथ-६ हिरापुर माविमा २०६६ सालदेखि राहत कोटामा शिक्षण पेसामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँकी श्रीमती राजु राना पनि वडा नं. ६ कै कृष्ण आधारभूत कानलीमा २०६४ सालदेखि बाल विकास शिक्षकमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । रानाका अनुसार गाउँलेहरूले विभिन्न आरोप लगाएर गाउँबाट विस्थापित गरेका थिए ।
२०७२ सालदेखि बालबच्चासहित आफ्नो परिवार सदरमुकाममा बस्दै आएको पनि रानाले बताउनुभयो । २०७३ सालमा गाउँलेहरूले उहाँको घर पनि जलाइदिएका थिए । त्यसपछि रानाले जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले रानाको परिवारलाई आठ लाख क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको थियो । तर, क्षतिपूर्ति आजसम्म नपाएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
रानाकी श्रीमती दशरथचन्द नगरपालिकाको वडा नं. ५ स्थित जगन्नाथ आधारभूत विद्यालय नौहाटमा बालविकास शिक्षकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँलाई पालिकाले पारिश्रमिक दिएको छ । तर, रानाले भने १४ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । राजनीतीकरण गरेर आफ्नो भविष्य बर्बाद पार्न खोजेको उहाँको भनाइ छ।
शिक्षा समितिले गर्ने निर्णय भएकाले अध्ययनकै क्रममा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले जानकारी दिनुभयो । यता शिक्षा समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सिद्धराज भट्टले दुईवटै पालिकाको समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । दुईवटै पालिकासँग छलफल भइरहेकाले दरबन्दी मिलानको समयमा रानाको समस्या समाधान हुने उहाँले बताउनुभयो।
पछिल्लो लेख साल्टको नुन बेच्दा व्यापारीलाई घाटा।